Dawladda Iyo Nolosha –Qaybtii Koowaad. W/Q: Dr-Mohamed Abdilahi | Hubaal Media	Home
HUBAALMEDIA.COM Dawladda Iyo Nolosha –Qaybtii Koowaad. W/Q: Dr-Mohamed Abdilahi
Falsafadda dawladnimo :
Dawladnimoda iyo fasiraaddeedu waxa ay in mugleh ka haysatay doodaha falsafadda siyaasadda iyo aqoonta bulsho muddo aad u dheer oo ku taxan sooyaalka uunkeena , la isla mana meel dhigin falsafadda ka dambeysa abuurka dawlad iyo waxii dadka baray ; tusaale ahaan faylasuufyada qaarkood ayaa yidhi nidaan dawladeed waxa uu salka ku hayaa in dadka taagta daran kaga gabadaan in ay adoonsadaan kuwa awoodda badani , qaar kalena waxa ay yidhaahdeen dawladdu waxa ay ka dhalatay dadaalka ay kuwa awoodda badani ugu jiraan in ay adoonsadaan kuwa awoodda yar , dawladdu waxa ay ka dhalatay damaca guumeysi iyo waxa ay ka dhalatay damaca gobonimo ayaa ah labo aragti falsafi ah oo lid isku ah hadana mid waliba leedahay maangalnimo ! sida ay labadaa aragtiyood u kala fog yihiin ayaa ay u baahsan tahay doodda ku saabsan asalka dawladeed . Inta aynaan faqin falsafadda dawlad aynu siino qeexitaan kooban oo ah mid hadda la isla ogol yahay ; dawlad waa hanaan maamul oo leh dhul la isla yaqaan , shacab ku nool , awood xukunta ( xukuumad ) oo ay u raacdo madaxbanaani (sovereignty) iyo aqoonsi .
Lasoco Qaybta Labaad…………….